स्विमसुट लगाएको फोटो सेयर गरेपछि जागिर खोसियो ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
स्विमसुट लगाएको फोटो सेयर गरेपछि जागिर खोसियो !
२६ वर्षीया भिक्टोरिया रुसको ओम्स्कको एक स्कूलमा पढाउँथिन् । केही दिन अघि उनले इन्स्टाग्राममा आफ्नो फोटो सेयर गरेकी थिइन् जसमा उनले स्विमसुट लगाएकी थिइन् ।
यो फोटोका कारण उनलाई जागिरबाट निकालियो । विद्यालयलाई उद्धृत गर्दै साइबेरियन टाइम्सले लेखेको छ, ‘यस्तो गरेर भिक्टोरियाले स्कूल र शिक्षण पेशालाई अपमानित गरेकी छिन् ।’
तर अब सोसल मिडियाका धेरैजसो प्रयोगकर्ता उनको समर्थनमा उत्रिएका छन् । करिब तीन हजार महिलाले स्विमसुट लगाएर फोटो सेयर गरिसकेका छन् र भिक्टोरियाको बर्खास्तीको विरोध गरिरहेका छन् ।
धेरैजसोले यो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । भिक्टोरियाले मानिसहरुको निकै समर्थन पाइरहेकी छिन् । एक व्यक्तिले इन्टरनेटमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छिन्, ‘यो पूर्ण रुपमा देखावटी हो । यस्तो गर्नु मुर्खता हो र निकै अपमानजनक पनि ।’
अर्की महिलाले लेखिन्, ‘हामी शिक्षक हौं तर मानिस पनि हौं । स्कूल बाहिर वा सोसल मिडियामा अलग देख्न पाउनु हाम्रो पनि अधिकारको कुरा हो ।’ अन्य महिलाले यो निर्णयलाई पूर्ण रुपमा मूर्खता बताएकी छिन् । एक इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताले भिक्टोरियालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।